Kutyhilwe iifowuni ezingama-49 zeHuawei kunye neNhlonipho eziya kuba ne-EMUI 9.1 | I-Androidsis
Iinkcukacha zokuqala malunga ne-EMUI 9.1 zichazwe kutshanje. Olu luguqulelo olutsha lokwahlulahlula ngokwezifiso iiHuawei kunye neHonor phones. Ikapa ezisa uthotho lwezinto ezintsha kunye I-beta esele isungulwe kwezinye iifowuni. Nangona uluhlu olupheleleyo lwee-smartphones eziza kuba nakho ukufikelela kuhlaziyo lwaluyimfihlakalo. Ngethamsanqa, inkampani ngokwayo sele yabelane ngolu luhlu.
Iifowuni ezingama-49 zizonke phakathi kweHuawei neNtlonipho ziyafana. Ke kubonakala ngathi luluhlu oluchanekileyo lweefowuni eziya kuthi zinolu hlaziyo kwi-EMUI 9.1 ngokusemthethweni. Yintoni enganikwanga ngalo mzuzu yimihla yohlaziyo. Nangona kwezinye iimodeli sele iqalile.
Uluhlu lubanzi kakhulu. Ukongeza, kukho iifowuni zorhwebo ezingaziswanga okanye eziza kumiliselwa eYurophu. Ke kukho into encinci kuyo yonke into ekuyo. Khumbula ukuba kule meko, Uhlaziyo kwi-EMUI 9.1 luzimele kwi-Android. Ke akufuneki ubenayo iPie ye-Android ukuze ube nale nguqulo yomaleko.
Uluhlu olupheleleyo lwee-smartphones zeHuawei kunye neNhlonipho eziya kuba nakho ukufikelela kwi-EMUI 9.1, njengoko inkampani ngokwayo sele iqinisekisile, imi ngolu hlobo lulandelayo:
IHuawei Mate 20 RS Porsche Desing
I-Huawei Mate 10 Pro
I-Huawei Mate 10 RS Uyilo lwePitoli
IHuawei Nova 2s
Inqaku lokuhlonipha i10
I-Huawei Nova 4th
I-Huawei Nova 3th
IHuawei Yonwabele i-9 Plus
IHuawei Yonwabele i-8 Plus
IHuawei Yonwabele i-MAX
IHuawei Yonwabele i-9S
IHuawei Yonwabele i-7S
IHuawei Yonwabele i-9e
Ukuhlonipha i-8X Max
I-Huawei MediaPad M5 (kwiinguqulelo zayo ezine-intshi eziyi-10,8, 10,1 kunye nee-8)
Siyabona ukuba ukongeza kwii-smartphones sikwanetafile ekolu luhlu. Ke ithebhulethi iya kuba nakho ukufikelela kwi-EMUI 9.1. Iifowuni zokuqala ezikuluhlu sele zinokufikelela kwi-beta, njengoko kuchaziwe. Kwakhona, khumbula ukuba le nguqulo yomaleko iza ne-GPU Turbo ephuculweyo.
Ukuhlaziywa kuya kwenzeka kwiinyanga ezimbalwa ezizayo. Akukho mihla inikiweyo, kuba yinto exhomekeke kwifowuni nganye. Kodwa kwezi nyanga zimbalwa zizayo kufuneka yenzeke ngokusemthethweni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Huawei » Kutyhilwe uluhlu lweefowuni eziza kuhlaziya kwi-EMUI 9.1
UXiaomi uza kuvula iivenkile ezingama-5.000 XNUMX eIndiya ngonyaka